Facebook က ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ Snapchat ပုံစံလုပ်ဆောင်ချက်သစ်တွေကို သုံးသပ်ကြည့်ခြင်း
29 Mar 2017 . 12:19 PM
Facebook ဟာ ဒီနေ့မှာ ပေါ်ပင်ဖြစ်နေတဲ့ Stories လုပ်ဆောင်ချက်အပါအဝင် Messaging Feature သစ်တွေကို အဓိက Mobile Apps ထဲမှာ ထည့်သွင်းလိုက်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီး နောက်ထပ် ဓာတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို Share လုပ်နိုင်မယ့် Popular Format သစ်တစ်မျိုးကို သုံးစွဲသူ သန်းတစ်ထောင်ထံ ယူဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို Snapchat ကပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ခုနှစ်မှာ စတင်တီထွင်ခဲ့ပေမယ့် Facebook က ဒီ Feature တွေကို Instagram, Instagram ကနေ Messenger App နဲ့ ယခုအခါ၊ Main Facebook App မှာပါ ထည့်သွင်းလာတာပါ။
ဒီ Update ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ iOS ရော၊ Android စနစ်တွေအတွက်မှာပါ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Update မှာ အဓိကပြုပြင်ထားတဲ့ အပိုင်းသုံးပိုင်း ပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေတော့ ဒီဇိုင်းပြန်ပြင်ထားတဲ့ in-app camera ၊ New Feed မှာ “Stories” လို့ခေါ်တဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို ပြသပေးမယ့် News Feed ရဲ့ ထိပ်ဆုံးနားက နေရာနဲ့ “Direct” လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ Private Messaging လုပ်ဆောင်ချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Facebook က အရင်ဆုံးထည့်သွင်းထားတာကတော့ “Stories” ပါ။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်က Snapchat နဲ့ အတူတူနီးပါးပါပဲ။ သင်က ပုံတစ်ပုံ၊ ဒါမှမဟုတ် ဗီဒီယိုတစ်ခု တင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး တင်လိုက်တဲ့ ဗီဒီယို၊ ဓာတ်ပုံက ၂၄နာရီအတွင်း ပြန်လည်ပျောက်ကွယ်သွားမှာပါ။
သင့်အနေနဲ့ သင့် Post မှာ Text ထည့်တာ၊ ရေးဆွဲတာ၊ စတေကာတွေထည့်တာနဲ့ Snapchat ပုံစံ Animated Filters တွေထည့်တာတွေကို ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Filter တွေကို ဘေးနားက အတန်းလေးအတိုင်း Swipe လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ ပြောင်းလဲပေးသွားမှာပါ။
Story တစ်ခုကို ဖန်တီးဖို့ ဘေးနားကို Swipe လုပ်တာဒါမှမဟုတ် News Feed ရဲ့ ထိပ်ပိုင်းနားက ကင်မရာပုံစံ icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။ သင်စိတ်တိုင်းကျ ဖန်တီးမှုတွေ ပြုလုပ်ပြီးရင် သင့်အနေနဲ့ Story ကို သူငယ်ချင်းအားလုံးဒါမှမဟုတ် သင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ Friend တွေကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီး ပေးပို့နိုင်မှာပါ။
စာရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း Message တွေကို “Direct” ဆိုတဲ့ Facebook App က နေဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုနဲ့ တွဲရိုက်ပြီး ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကလည်း Instagram ရဲ့ Direct Messages လုပ်ဆောင်ချက်လိုပါပဲ။
Stories တွေက ကင်မရာအခြေခံဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေကို မြှင့်တင်လိုက်တာပါ
ပုံရိပ်ကို အခြေခံတဲ့ Messaging လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အရမ်းခေတ်စားလာပါတယ်။ Facebook က Stories တွေကို မိတ်ဆက်လိုက်တာဟာ ဒီ Concept ကို အရေးကြီးကြောင်း လက်ခံလိုက်တာပါပဲ။ ဒါဟာဆိုရင် စာရိုက်ဆက်သွယ်ရေးကို ဖောက်ခွဲပစ်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပြောင်းအလဲဟာ Publisher တွေ၊ Advertiser တွေနဲ့ လူတွေအကြားမှာ အချိုးအကွေ့တစ်ခုဖြစ်လာပြီး မကြာခင်ကာလအတွင်း Stories တွေမှာပါ ကြော်ငြာတွေကို တွေ့ရဖို့ရှိနေပါတယ်။
Stories တွေကို ထည့်သွင်းပြီး ယှဉ်ပြိုင်မှုက Snapchat ကို သဲကြီးမဲကြီးတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုလား?
Facebook ဟာ Stories လုပ်ဆောင်ချက်ကို သုံးစွဲသူတွေထံ ယူဆောင်လာပြီးနောက်၊ Snap ရဲ့ Genius ဆန်ဆန် ထုတ်လုပ်မှုတစ်ခုကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း စိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာဆိုရင် Facebook ရဲ့ လက်ဝါးကြီးအုပ်တဲ့ ပုံစံသစ်တစ်ခုကို မြင်ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ ယှဉ်ရင် Audience ပိုများတဲ့ Facebook ရဲ့ အရွေ့ဟာ Snap ကို ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ သံသယဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။
Stories တွေက Second News Feed ဖြစ်လာနိုင်လား?
News Feed ဟာ Facebook ရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတော့ ဒုတိယမြောက် Feed ကို ထပ်မံထည့်သွင်းလိုက်ပါပြီ။ News Feed ရဲ့ ထိပ်ဆုံးနေရာဟာ မြင်သာထင်သာရှိတဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် ဒီနေရာမှာ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကို နေရာပေးလိုက်တာဟာ မှတ်သားဖွယ် ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ Update လုပ်ပြီး ဒီမနက်ပဲ သုံးကြည့်ပြီးပါပြီ။ ?
ကိုယ်ပိုင်အမြင်နဲ့ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစပိုင်းဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ Error တစ်ချို့ရှိနေသေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကျရင် ဒီထိပ်ဆုံးက Stories တွေကို အရင်ကြည့်ပြီးမှ နောက်က Feed တွေ၊ Post တွေကို ဆက်ဖက်သွားကြမှာမလွဲပါပဲ။ ဒါကြောင့်သင့်မှာ သူများရဲ့ Timeline ရဲ့ ထိပ်ဆုံးတစ်နေရာမှာ နေရာယူဖို့ အခွင့်အရေးလည်း ရရှိလာပါပြီ။ ဒါက လုပ်ဆောင်ချက်အကြောင်းပါ။
ခြုံငုံသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်မကြိုက်ပါဘူး။ Facebook က Facebook ပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အခုတော့ Snapchat ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊ Instagram က Feature တွေ၊ Messenger တွေနဲ့ အရမ်းရှုပ်ယှက်ခတ်လာပါပြီ။ ဒါကြောင့် Facebook ရဲ့ အနှစ်သာရက တဖြည်းဖြည်းလျော့ပါးလာပါတယ်။ စီးပွားရေးပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း ကုမ္ပဏီတစ်ခုက တိုးတက်လာလို့ လိုက်ဝယ်မယ်၊ ဝယ်လို့မရရင် သူတို့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ရအောင်ယူတဲ့ အရင်းရှင်ဆန်ဆန် ပုံစံကို Facebook က ဗြောင်ကျင့်သုံးပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး ကုမ္ပဏီကြီးတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ၂၀၁၃ခုနှစ်က တစ်ကမ္ဘာလုံးဝင်ငွေ “ဒေါ်လာသန်း ၇၀၀၀” သာရှိတဲ့ Facebook အမြတ်ဟာ ၂၀၁၆ခုနှစ်တုန်းက “ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၂၇၀၀၀” ပါ။ 🙂
Facebook က ထညျ့သှငျးလိုကျတဲ့ Snapchat ပုံစံလုပျဆောငျခကျြသဈတှကေို သုံးသပျကွညျ့ခွငျး
Facebook ဟာ ဒီနမှေ့ာ ပျေါပငျဖွဈနတေဲ့ Stories လုပျဆောငျခကျြအပါအဝငျ Messaging Feature သဈတှကေို အဓိက Mobile Apps ထဲမှာ ထညျ့သှငျးလိုကျကွောငျး ထုတျဖျောခဲ့ပွီး နောကျထပျ ဓာတျပုံနဲ့ ဗီဒီယိုတှကေို Share လုပျနိုငျမယျ့ Popular Format သဈတဈမြိုးကို သုံးစှဲသူ သနျးတဈထောငျထံ ယူဆောငျခဲ့ပါတယျ။
ဒီလုပျဆောငျခကျြကို Snapchat ကပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ခုနှဈမှာ စတငျတီထှငျခဲ့ပမေယျ့ Facebook က ဒီ Feature တှကေို Instagram, Instagram ကနေ Messenger App နဲ့ ယခုအခါ၊ Main Facebook App မှာပါ ထညျ့သှငျးလာတာပါ။
ဒီ Update ကို တဈကမ်ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ iOS ရော၊ Android စနဈတှအေတှကျမှာပါ ရရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီ Update မှာ အဓိကပွုပွငျထားတဲ့ အပိုငျးသုံးပိုငျး ပါဝငျပါတယျ။ အဲ့ဒါတှတေော့ ဒီဇိုငျးပွနျပွငျထားတဲ့ in-app camera ၊ New Feed မှာ “Stories” လို့ချေါတဲ့ ဓာတျပုံနဲ့ ဗီဒီယိုတှကေို ပွသပေးမယျ့ News Feed ရဲ့ ထိပျဆုံးနားက နရောနဲ့ “Direct” လို့ နာမညျပေးထားတဲ့ Private Messaging လုပျဆောငျခကျြတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
Facebook က အရငျဆုံးထညျ့သှငျးထားတာကတော့ “Stories” ပါ။ ဒီလုပျဆောငျခကျြက Snapchat နဲ့ အတူတူနီးပါးပါပဲ။ သငျက ပုံတဈပုံ၊ ဒါမှမဟုတျ ဗီဒီယိုတဈခု တငျနိုငျမှာဖွဈပွီး တငျလိုကျတဲ့ ဗီဒီယို၊ ဓာတျပုံက ၂၄နာရီအတှငျး ပွနျလညျပြောကျကှယျသှားမှာပါ။
သငျ့အနနေဲ့ သငျ့ Post မှာ Text ထညျ့တာ၊ ရေးဆှဲတာ၊ စတကောတှထေညျ့တာနဲ့ Snapchat ပုံစံ Animated Filters တှထေညျ့တာတှကေို ပွုလုပျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
Filter တှကေို ဘေးနားက အတနျးလေးအတိုငျး Swipe လုပျလိုကျရုံနဲ့ ပွောငျးလဲပေးသှားမှာပါ။
Story တဈခုကို ဖနျတီးဖို့ ဘေးနားကို Swipe လုပျတာဒါမှမဟုတျ News Feed ရဲ့ ထိပျပိုငျးနားက ကငျမရာပုံစံ icon လေးကိုနှိပျလိုကျရုံနဲ့ ပွုလုပျနိုငျမှာပါ။ သငျစိတျတိုငျးကြ ဖနျတီးမှုတှေ ပွုလုပျပွီးရငျ သငျ့အနနေဲ့ Story ကို သူငယျခငျြးအားလုံးဒါမှမဟုတျ သငျရှေးခယျြထားတဲ့ Friend တှကေို စိတျကွိုကျရှေးခယျြပွီး ပေးပို့နိုငျမှာပါ။
စာရိုကျခငျြတယျဆိုရငျလညျး Message တှကေို “Direct” ဆိုတဲ့ Facebook App က နဓောတျပုံ၊ ဗီဒီယိုနဲ့ တှဲရိုကျပွီး ပို့ပေးနိုငျပါတယျ။ ဒါကလညျး Instagram ရဲ့ Direct Messages လုပျဆောငျခကျြလိုပါပဲ။
Stories တှကေ ကငျမရာအခွခေံဆကျသှယျရေးစနဈတှကေို မွှငျ့တငျလိုကျတာပါ
ပုံရိပျကို အခွခေံတဲ့ Messaging လုပျဆောငျခကျြတှဟော အှနျလိုငျးပျေါမှာ အရမျးခတျေစားလာပါတယျ။ Faceebook က Stories တှကေို မိတျဆကျလိုကျတာဟာ ဒီ Concept ကို အရေးကွီးကွောငျး လကျခံလိုကျတာပါပဲ။ ဒါဟာဆိုရငျ စာရိုကျဆကျသှယျရေးကို ဖောကျခှဲပဈမှာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီအပွောငျးအလဲဟာ Publisher တှေ၊ Advertiser တှနေဲ့ လူတှအေကွားမှာ အခြိုးအကှတေ့ဈခုဖွဈလာပွီး မကွာခငျကာလအတှငျး Stories တှမှောပါ ကွျောငွာတှကေို တှရေ့ဖို့ရှိနပေါတယျ။
Stories တှကေို ထညျ့သှငျးပွီး ယှဉျပွိုငျမှုက Snapchat ကို သဲကွီးမဲကွီးတိုကျခိုကျမှုတဈခုလား?
Facebook ဟာ Stories လုပျဆောငျခကျြကို သုံးစှဲသူတှထေံ ယူဆောငျလာပွီးနောကျ၊ Snap ရဲ့ Genius ဆနျဆနျ ထုတျလုပျမှုတဈခုကို ပွောငျပွောငျတငျးတငျး စိနျချေါလိုကျပါတယျ။ ဒါဟာဆိုရငျ Facebook ရဲ့ လကျဝါးကွီးအုပျတဲ့ ပုံစံသဈတဈခုကို မွငျရတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ တဈကမ်ဘာလုံးနဲ့ ယှဉျရငျ Audience ပိုမြားတဲ့ Facebook ရဲ့ အရှဟေ့ာ Snap ကို ထိခိုကျနိုငျတယျဆိုတာကတော့ သံသယဖွဈစရာမရှိပါဘူး။
News Feed ဟာ Facebook ရဲ့ အအောငျမွငျဆုံး ထုတျကုနျတဈခုဖွဈပါတယျ။ ယခုတော့ ဒုတိယမွောကျ Feed ကို ထပျမံထညျ့သှငျးလိုကျပါပွီ။ News Feed ရဲ့ ထိပျဆုံးနရောဟာ မွငျသာထငျသာရှိတဲ့ နရောတဈခုပါ။ ဒါကွောငျ့ ဒီနရောမှာ လုပျဆောငျခကျြတဈခုကို နရောပေးလိုကျတာဟာ မှတျသားဖှယျ ပွောငျးလဲမှုတဈခုဖွဈပါတယျ။
ကြှနျတျောကတော့ Update လုပျပွီး ဒီမနကျပဲ သုံးကွညျ့ပွီးပါပွီ။ ?
ကိုယျပိုငျအမွငျနဲ့ဆိုရငျတော့ အဆငျပွပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အစပိုငျးဆိုတော့ နညျးနညျးတော့ Error တဈခြို့ရှိနသေေးတာကို တှရေ့ပါတယျ။ နောကျပိုငျးကရြငျ ဒီထိပျဆုံးက Stories တှကေို အရငျကွညျ့ပွီးမှ နောကျက Feed တှေ၊ Post တှကေို ဆကျဖကျသှားကွမှာမလှဲပါပဲ။ ဒါကွောငျ့သငျ့မှာ သူမြားရဲ့ Timeline ရဲ့ ထိပျဆုံးတဈနရောမှာ နရောယူဖို့ အခှငျ့အရေးလညျး ရရှိလာပါပွီ။ ဒါက လုပျဆောငျခကျြအကွောငျးပါ။
ကိုယျပိုငျအမွငျဆိုရငျတော့ သိပျမကွိုကျပါဘူး။ Facebook က Facebook ပဲဖွဈသငျ့ပါတယျ။ အခုတော့ Snapchat ရဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှေ၊ Instagram က Feature တှေ၊ Messenger တှနေဲ့ အရမျးရှုပျယှကျခတျလာပါပွီ။ ဒါကွောငျ့ Facebook ရဲ့ အနှဈသာရက တဖွညျးဖွညျးလြော့ပါးလာပါတယျ။ စီးပှားရေးပိုငျးမှာဆိုရငျလညျး ကုမ်ပဏီတဈခုက တိုးတကျလာလို့ လိုကျဝယျမယျ၊ ဝယျလို့မရရငျ သူတို့လုပျဆောငျခကျြတှကေို နညျးအမြိုးမြိုးနဲ့ ရအောငျယူတဲ့ အရငျးရှငျဆနျဆနျ ပုံစံကို Facebook က ဗွောငျကငျြ့သုံးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး ဝငျငှအေကောငျးဆုံး ကုမ်ပဏီကွီးတှထေဲက တဈခုဖွဈလာပါတယျ။
ဟုတျပါတယျ။ ၂၀၁၃ခုနှဈက တဈကမ်ဘာလုံးအမွတျဝငျငှေ “ဒျေါလာသနျး ၇၀၀၀” သာရှိတဲ့ Facebook အမွတျဟာ ၂၀၁၆ခုနှဈတုနျးက “ဒျေါလာသနျးပေါငျး ၂၇၀၀၀” ပါ။ ?